cadnaan kapul – Page 30 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxweyne Farmaajo oo Dab Kusii Shiday Khilaafka Dowladda Iyo Madaxda Maamul Gobaleedyada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray magaalada Jubba ee caasimadda Koofurta Suudaan ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabbaaldegayo heshiiska nabadeed ee dalkaas oo Madaxda IGAD ay garwadeen ka ahaayeen. Madaxweyne Farmaajo oo kamid ahaa madaxdii markhaatiga ka ahaa heshiiskii nabadeed ee bishii September magaalada Addis Ababa ku dhexmaray dhinacyada Koofurta Suudaan ayaa xalay mar uu kulan ...
Daawo Sawirro: Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Soo Hor Muuqday Heshiiska Koofurta Suudaan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray magaalada Jubba ee caasimadda dalka Koofurta Suudaan ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabbaaldegayo heshiiska nabadeed ee dalkaas oo Madaxda Urur Goboleedka IGAD ay garwadeen ka ahaayeen. Madaxweyne Farmaajo ayaa kamid ahaa Madaxweynayaashii markhaatiga ka ahaa heshiiskii nabadeed ee bishii September magaalada Addis Ababa ku dhexmaray dhinacyada Koofurta Suudaan, kaas ...
Faah-faahin:-Dagaalyahano Ka Tirsan Shabaab oo Lagu Dilay Duqeyn Diyaaradeed
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeyn diyaaradeed oo xalay ka dhacday deegaanka Ceel-Dheer oo qiyaastii 62 KM dhanka galbeed kaga beegan Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan. Dhawaqa jugta culus ayaa si weyn loogu maqlay deegaanka, oo saldhig ay ku leeyihiin dagaalyahanadda Xarakadda Al-shabaab. Saraakiil ka Tirsan Ciidamadda Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa Idaacadda Simba u sheegay in duqeyn lagu dilay ...
DEG DEG: Dagaal Xoogan oo Hada Ka Socda Kismaayo Iyo Jugta Madaafiic La Is Dhafsaday
Dagaaal xoogan ayaa goordhaw ka qarxay Magaalada Kismaayo ee Xarunta maaamulka Jubbaland. Goobjooge Simba lasoo xiriiray daqiiqado ka hor ayaa sheegay in uu maqlayo daryanka hubka nuucyadiisa kala duwan iyo in la maqlayo Madaafiic xoogan. Warka ayaa ah mid daqiiqado ka hor soo gaaaray War qabadka Idaacada Simba Ee magaalada Muqdisho, balse goordhaw Fillo Faah faahinta dagaalkaasi. Dagaalka wali ...
DEG DEG: Israsaaseyn Khasaare Geysatay Oo Goordhaw Ka Dhacday Magaalada Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya is Rasaaseyn khasaare sababtay oo goordhaw dhax martay Ciidamo uu watay Gen. Sheegow iyo ciidamo katirsan Booliska Soomaaliya. Is rasaaseyntan ayaa ka dhacday meel ku dhaw Sarta Seybiyaano, kadib markii ay wada murmeen ciidan Boolis ah iyo ciidamo Saarnaa Gaari Cabdi Bille ah oo uu watay Gen. Sheegow oo katirsan Saraakiisha ciidamada Dowladda Soomaaliya. ...
DEG DEG: Dhaawacyada 22 Qof Oo Goordhaw La Dhigay Isbitaalka Digfeer ee Magaalada Muqdisho
Faah faahin kasoo baxeysa diyaarad wada dhaawacyo kala duwan oo goordhaw soo caga dhigatay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Muqdisho. Saraakiil katirsan kuwa Amaanka garoonka ayaa Radio Simba u sheegay in Muqdisho ay soo gaartay diyaarad wada 22 ruux oo qaba dhaawacyo kasoo gaaray dagaal beeleedyo lagu hoobtay oo maalmihii danbe ka dhacayay deegaano katirsan Gobolka Sool. Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya ...
DEG DEG : Shil Khasaare Dhimasho Geystay Oo Goordhaw Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Shil khasaaro dhimasho geystay ayaa goordhaw ka dhacay magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoyska Baar Ubax iyo Carwo Idka ee degmada Howlwadaag. Inta la xaqiijiyay wiil yar oo Da’diisa lagu qiyaasay 13 jir ayaa gaari nuuca Xamuulka ku jiiray goordhaw agagaarka Isgoyska Baar Ubax, goobjooge ayaa Simba u sheegay in wiilkaasi uu kaxeynayay Baasiilka. Ciidamo katirsan ...
12 Milyan Muslimiin Ah Oo Ka Qeyb Galay Janaazada Waardiye Dilay Wasiirkiisa + Sawirro
Hawaynay u dhalatay waddanka Pakistaan ayaa si bareer ugu gaftay Nabigeenna Muxammad (NNKH) ayaa waxa ayna dhacdadaasi ku caro badan ku abuurtay muslimiinta Caalamka. Haweyneydan waxaa difacay mid kamid ah Waziirada Pakistaan oo saaxiib la ah dowladda Mareekanka waxaana taasi ka dhashay in Waardiyihii wasiirka oo muslim ahaa uu u dulqaadan waayo in la difaaco haweeneydaasi, ayaa Waxa uu wasiirkii ...
Haweeneey Loo Doortay Madaxweynaha Ethiopia
Baarlamanka Ethiopia markii ugu horeysay haweyney u magacaabay madaxweynaha waddankaas. Baarlamaanka waddanka Ethiopia ayaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi u magacaabay Sahle-Work Zewde waxa ayna noqoneysaa haweyneydii ugu horeysay ee Itoopiya madaxweyne ka noqota, iyadoo badali doonta Mulatu Teshome oo xilkaasi ka degay. Haweyneydan ayaa iska soo casishay xilalkeedii wakiilka gaarka ee xoghayah guud iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee midowga ...
Ogow Cida Dhiseysa Kumanaan Ciidamo Cusub Oo Aan Lagala Tashan Dowladda Soomaaliya
Golaha iskaashiga maamul gobaleedyada dalka oo afar maalin shir uga socday gudaha magaalada Garoowe ee Puntland ayaa soo saaray War Murtiyeed ka kooban 15 qodob. War murtiyeedka kasoo baxay golaha Iskaashiga aya waxaa kamid ahaa in hogaanka golaha uu yeesho ciidamo gaar ah oo gaaraya ilaa 4 kun askari oo maamul walbaa laga rabo inuu keeno ilaa 1,000 Askari. “In ...